ရတ်ဖို့ကို ကာဗာနီဆီကသင်ယူဖို့နဲ့ ရွေးချယ်မှု နှစ်ခုကို ဆိုးရှားလ်ပေးပြီ… – FBV SPORT NEWS
ရတ်ဖို့ကို ကာဗာနီဆီသင်ယူဖို့နဲ့ ရွေးချယ်မှု နှစ်ခုကို ဆိုးရှားလ်ပေးပြီ…
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ဟာ ပရီးမီးယားလိဂ်ဇယားထိပ်မှာ ဖူဟမ်အသင်းကိုအနိုင်ရပြီး အောင်ပွဲခံပြီး အသင်းရဲ့ Key Player တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်တွေကိုလည်း မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်…
မန်ချက်စတာယူနိက်တက်ဟာ ပေါ့ဘာ အပြောင်းအရွေ့ရဲ့ စိတ်မချမ်းမြေ့စရာသတင်းတချို့နဲ့ တွေ့ခဲ့ရပြီး နောက်တခုဖြစ်တဲ့ ရတ်ဖို့စ် နဲ့ ကာဗာနီတို့ရဲ့ လီဗာပူးနဲ့ ပွဲမှာ နားလည်မှုလွဲတဲ့ပြသနာကိုလည်း ကြုံတွေ့ခဲ့၇ပါတယ်..
ယင်းဖြစ်ရပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး နည်းပြကြီး ဆိုးရှားလ်ဟာ တကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့လို့ လူပြောများနေတဲ့ ရတ်ဖို့စ်ကို ပွဲထွက်ခွင့်နားပြီး အရံခုံထိုင်ကာ အပြစ်ပေးပြီး ယခု အခါ မှာ ရွေးချယ်မှုတွေလုပ်ဖို့ပြောလာပါပြီ….
ဆိုးရှားလ်က ” ရတ်ဖို့စ် အနေနဲ့ အသင်းအောင်မြင်မှုတွေပြန်လည်ရယူဖို့ နေရာမှာ အခုလိုလုပ်နေလို့ မရပါဘူး …..တကိုယ်ကောင်းဆန်တဲ့ အချက်အသင်းကို နစ်မွန်းစေတာမို့ ကာဗာနီဆီက တိုက်စစ်မှူးတယောက်ဟာ ဘယ်လို ကစားရတယ်ဆိုတာကို သင်ယူရပါမယ်…
နောက်တခုက ကာဗာနီဆီက သင်ယူမှာလား အရံခုံမှာဘဲ ထိုင်နေမလားဆိုတာရယ် …သူ့နေရာကို အစားထိုဖို့ ကျနော့်ကို စိန်ခေါ်နေတာလားဆိုတာကို မေးချင်ပါတယ်…နောက်ပြီး သူ့နေရာကို အစားထိုဖို့ ဟာလန်းကို ခေါ်ယူဖို့ ကျနော်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်..
အဲ့ဒီတော့ ရတ်ဖို့စ် အနေနဲ့ ကာဗာနီ ဆီက သင်ယူမလား အရံခုံမှာဆက်ထိုင်မလား သူ့နေရာကို အစားထိုးဖို့ လုပ်ရမလားဆိုတာကို ရွေးချယ်ပါလို့ဘဲ ” ပြောချင်ပါတယ်….
RK (FBV Sport News)